५0 लाख पुरस्कार राशिको नेपाल स्टार’ शो हुने - Baikalpikkhabar
५0 लाख पुरस्कार राशिको नेपाल स्टार’ शो हुने
नेपाली माटोको आफ्नै सुगन्ध सहित नेपाली गायन रियालिटी शो ‘नेपाल स्टार’ शुरु भएको छ । यो प्रतियोगिताको आयोजना नेपाल टेलिभिजनले गरेको हो भने यसको व्यबस्थापन की एडभरटाइजिङ ले गर्न लागेको जनाइएको छ । नेपालको पहिलो र नेपाली जनताको करबाट संचालित सरकारी टेलिभिजनले बिदेशी फ़्रेञ्चाईज बिना यो प्रतियोगिता संचालन गर्दैछ । साथै, यो प्रतियोगिताका बिजयीले अहिलेसम्म कै ठुलो धनराशीको पुरस्कार जित्ने घोषणा ‘नेपाल स्टार’ को टिमले गरेको छ । ‘नेपाल स्टार’ बन्न सफल हुने प्रतिभाले नेपाल स्टारको उपाधि सहित ५० लाख नगद र बिभिन्न प्रायोजकका गिफ्ट ह्याम्परहरु प्राप्त गर्नेछन ।
‘नेपाल स्टार’ को अर्को आकर्षण यसका जज (निर्णायक) हरु हुन् । नेपाली सुगम संगीतका तीनजना विशिष्ट धरोहरहरु संगीतकार आलोक श्री, गायक रामकृष्ण ढकाल र गायिका अन्जु पन्तले जजको जिम्मा पाएका छन् । लामो समय नेपाली सुगम संगीतमा हिट नम्बरहरु दिन सफल यी संगीत साधकहरु आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल मानिन्छन । देशका कुनाकुना र विदेशमा शहर शहर यी तीनजनाका संगीत हरेक दिन गुञ्जिईरहेका हुन्छन । संगीतका यिनै हस्तीहरुले देशका ठाउँ ठाउँमा पुगेर गाउँ गाउँ र दूरदराजका प्रतिभाको खोजी गर्नेछन । उनीहरुले बस्तीमा लुकेका दर्जनौं प्रतिभाहरुलाई नेपाली गीतसंगीतको मूल प्रवाहमा ल्याउने विश्वास गरिएको छ
बिहिबार, २४ पुष, २०७६, दिउँसोको ०१:१८ बजे
बिनायो वादनको विश्वव्यापी प्रतियोगिता शुरु
फाइल तस्वीर : विनायो बजाउँदै लोक गायक एलपी जोशी खोटाङ/ किरात राई सांस्कृतिक कलाकार सङ्घले अनलाइनमार्फत विश्वव्यापी कोङकोङमा (बिनायो) वादन खुला प्रतियोगिता शुरु गरेको छ । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सांस्कृतिक कलाकार सङ्घले अनलाइनमार्फत खुला विश्वव्यापी
श्रुतिको ‘चुँडेल’ प्रेम !
बलिउडमा बोल्ड अभिनेत्रीको सूची बनाउदा त्यसमा नछुट्ने नाम हो श्रुति हासन । श्रुति सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नयाँ फोटोसुटका कारण चर्चामा आइरहन्छिन् । उनी आफ्नो लुक्सलाई प्रयोग गर्छिन् । जसकारण कैयौं पटक ट्रोलको निशानामा परेकी छन् । श्रुतिको गाढा निलाे
भ्रष्टाचारी नेताहरुलाई लागोस कोरोनाको गीत बन्देज
झापा, १९ जेठ / गायक रामु विरहीले व्यङ्ग्य गर्दै सार्वजनिक गरेका कोरोना गीत केही शब्दका कारण विवाद र चर्चामा तानिएको छ । युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको गीतमा ‘भ्रष्टाचारी नेतालाई लागोस् कोरोना’ भनिएको छ भने ‘सोझा सिधा जनताबाट भागोस् कोरोना’ भनिएको
उच्च न्यायलयमा पुगिन् जुही चावला
जेठ १८ / बलिउड नायिका जूही चावलाले भारतमा ‘५ जी’ प्रविधी जडानको विरुद्धमा दिल्लीको उच्च न्यायलयमा उजुरी दिएकी छिन् । उनले दिएको उजुरीको पहिलो सुनुवाई सोमबार भएको छ । अर्को सुनुवाई जुन २ तारिखमा हुने भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन्
प्रताप र अनुको सांगीतिक ‘माया’
गायक प्रताप दास र गायिका अनु चौधरीको स्वरमा रहेको ‘माया’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा गोविन्द कुइँकेलको शब्द तथा डिबी लामाको संगीत छ । प्रेम र समर्पणलाई समेटिएको गीतका प्रस्तुतकर्ता मनोज कार्की हुन् । भिडियोमा उषा उप्रेती र
कतिपय सिनेमा यस्ता हुन्छन्, जसले इतिहास बनाउँछ । यस्ता सर्वकालिन सिनेमाहरु युगौं युगसम्म अजम्बरी हुन्छन् । सिनेमाले भनेको कथा, बनाएको संरचना र गरेको प्रयोगले यस्ता सिनेमालाई सधै जिउँदो राख्छ । यहाँ त्यस्तै २५ सिनेमाबारे बताइएको छ । २५. ताइवानी फिल्म
मोरङ / मोरङ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी (प्रहरी...
विराटनगर / सुरक्षाकर्मीलाई छल्नका लागि लागुऔषध ओसारपसार गर्ने...